Ifreyimu Esetshenzisiwe Yekhabhoni - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Ifreyimu Esetshenzisiwe Yekhabhoni)
Enziwe ngokwezifiso i-CNC aluminium FPV ifreyimu
Enziwe ngokwezifiso i-CNC aluminium FPV ifreyimu I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa ngokucindezela okukhulu noma...
I-CNC ye-aluminium eqondile yokwakha ifreyimu
Hobbycarbon CNC eqondile aluminium ukukhweza kwefoni I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa ngokucindezela okukhulu noma...
Ikhwalithi ephezulu yekhabhoni ye-telescopic boom 1.Introduction I-Carbon fiber tube inezinzuzo zamandla aphezulu, impilo ende, ukumelana nokugqwala, isisindo esincane nokuqina okuphansi. Kusetshenziswa kabanzi kuma-kites, indiza yendiza eyindiza, amabakaki wezibani, imishini ye-PC imishini, imishini yokufaka,...
I-3K Surface Yokwejwayelekile Yekhabhoni ye-Fibre Drone
I-3K Surface Yokwejwayelekile Yekhabhoni ye-Fibre Drone Ubukhulu bepuleti bungama-2,5mm. Ipuleti lenziwa nge-T300 / T700 high epoxy resin. Kukhanya futhi kuzinzile, amapuleti e-CF ajwayele ukukhethwa ngamakhasimende ukuthi athathe amanye. Incazelo Yomkhiqizo: Into No.:HCT083 Indwangu: 3K Full Carbon Fibre Ubukhulu:...
I-20X20X500mm i-100% yekhabhoni fiber isikwere esikhulu IDrone
I-20X20X500mm i-100% yekhabhoni fiber isikwere esikhulu IDrone 1.Introduction Lawa Khabhoni we-3K Carbon Fubes Carbon enziwe nge-carbon fiber emsulwa ngensimbi enhle noma i-weave ebonakalayo; Kutholakala ngemibala namasayizi ahlukahlukene (imibala evamile emnyama); Izinhlobo ezenziwe ngokwezifiso zamukelwa,...
Ifreyimu Esetshenzisiwe Yekhabhoni Ifektri Yenziwe Yekhabhoni ye-Fibon Intengo Ehle Ebunjiwe Yekhabhoni Isisindo Sekhabhoni Amapuleti Wokushisa Kwekhabhoni ukusetshenziswa kweshidi le-carbon fiber I-Roll Ehlanganisiwe Yekhabhoni ye-Carbon Fub Ishidi lekhabhoni le-3K
Ifreyimu Esetshenzisiwe Yekhabhoni Ifektri Yenziwe Yekhabhoni ye-Fibon Intengo Ehle Ebunjiwe Yekhabhoni Isisindo Sekhabhoni Amapuleti Wokushisa Kwekhabhoni